Ma jiraan rag ay lamaanahooda ku xad gudbeen? | Bezzia
Maria Jose Roldan | 09/05/2022 22:05 | Cilmi-nafsiga
Inta badan dadku waxay la xidhiidhaan xadgudubka dumarka, iyada oo aan xisaabta lagu darin in ay tahay arrin rag badan oo dalkan ku nool ay iyaguna dhibaato ku qabaan. Kiisaska ragga lagu xad-gudbay si dhib leh ayay u muuqan karaan, tallaabooyinka la qaadayo ama ciqaabtooda aad ayay uga yar yihiin marka loo eego kiiska xadgudubka haweenka.
Maqaalka soo socda waxaan uga hadli doonaa si faahfaahsan. ee ragga si xun ula dhaqma.
1 xadgudubka ragga
2 Maxaa ka dhalan kara si xun ula dhaqma ragga?
Inkastoo xadgudubka loo arko mid gaar u ah dumarka, Waa in la sheegaa in ay jiraan kiisas badan oo rag ah oo la kulma xadgudubyo jireed iyo mid maskaxeed oo uga yimaada lammaanahooda. Waxaa jira dhowr arrimood oo ka dhigaya muuqaal la'aanta xadgudubka ragga mid muuqata:
Waxaa jirta kalsooni darro dhanka maamulka ah ku saabsan xadgudubka ragga.
Arrin kale ayaa ah xaqiiqda rag badan baa xishooday marka ay timaado in la aqoonsado in lammaanahooda uu si xun ula dhaqmo.
Bulshadu ma awoodo inay la xidhiidho ku xad-gudbid iyadoo ay xaqiiqadu tahay in uu nin ku dhibi karo.
Marka la eego heerka sharciga, si xun ula dhaqanka nin gabi ahaanba waa mid aan dheeli tirnayn ku saabsan si xun ula dhaqma dumarka.
Waxaa meesha ka maqan kheyraad muuqda oo cad ee ku saabsan dhaqan xumada ragga.
Maxaa ka dhalan kara si xun ula dhaqma ragga?
In kasta oo inta badan kiisaska, si xun loola dhaqmo ragga aysan inta badan keenin dhimasho, waa in la ogaadaa in dhaawaca heerka maskaxeed uu aad muhiim u yahay. Waxaa jira rag badan oo soo gaaray dhaawac weyn marka loo eego isku kalsoonida iyo kalsoonida. Waxay noqdaan kuwo aad u niyad jabsan nolosha, wax si toos ah u saameeya nolol maalmeedkooda. Kiisaska ugu daran, ninka lagu xadgudbay wuxuu la kulmi doonaa xumaan gaar ah oo ku saabsan qaybaha kala duwan ee noloshiisa, laga bilaabo shakhsi ahaan ilaa shaqada. Xadgudubku wuxuu noqon karaa mid aad u daran oo joogto ah oo aan caadi ahayn inay ku dhameeyaan inay doortaan is-dilid marka ay timaaddo joojinta wax walba.
Xogtu waa caddahay oo iftiiminaysaa waana taas heerka is-dilka aad bay uga badan tahay ragga la garaaco marka loo eego dumarka la garaaco. Marka la eego tan, waxa ay hadhaysaa oo kaliya in wax laga qabto dhibaatada si madax-u-socod ah oo la siiyo muhiimadda ay dhab ahaantii leedahay. Mid ka mid ah midna mid kale kama foga oo in kasta oo si xun loola dhaqmo dumarka la ciqaabo, haddana ma dhammaanayso dhibta ay rag badan ku hayaan lammaanahooda.
Isku soo wada duuboo, inkasta oo qayb ka mid ah bulshadu aanay si buuxda uga warqabin, haddana waa in la tilmaamaa in nasiib darro. Rag badan ayaa lagu xad-gudbi jiray lamaanayaashooda. Waa in aan cambaareyno nooc kasta oo xadgudub ah, ha ahaato ragga ama dumarka. Waxaa loo baahan yahay in si weyn loo eego, maamulkuna uu ku baraarugo mar walba in ragga qaar ay dhibaato jireed iyo mid maskaxeed kala kulmaan lamaanahooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Cilmu-nafsiga iyo lamaanaha » Cilmi-nafsiga » Ma jiraan rag ay lamaanahooda ku xad gudbeen?
Mascarpone iyo keega liin